Jubbaland oo lagu eedeeyay in Ciidamo ka bar bar dagaalama Puntland ay u daabuleyso Mudug * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
By MAREEG	 Last updated Dec 1, 2015
Kismaayo ( Mareeg)-Cabdirashiid Macallin Gaas oo ka mid ah Saraakiisha dowladda Federaalka Soomaaliya ee ku sugan duleedka Magaalada Kismaayo ayaa ku eedeeyay Maamulka Jubbaland in Ciidamo ay u daabulayaan Gaalkacyo si ay uga bar bar dagaalamaan Ciidamada Puntland.
“ aniga ma ku dhahaayo waa la qaaday laakiin waxaan la socdaa in lagu uruurinayo garoonka diyaaradaha Magaalada Kismaayo lana doonayo in la geeyo Gobolka Mudug si au u xoojiyaan Ciidamada Puntland” ayuu yiri Cabdirashiid Macallin Gaas.
Dhinaciisa Wasiirka Warfaafinta Jubbaland Cabdinuur oo aan wax ka weydiinay eedeymaha maamulkooda loo jeediyay ayaa iska fogeeyay wararkaasi isagoo ku tilmaamay kuwa ka fog xaqiiqda.
“ dadka waxaas idiin sheegaya waxa ay u adeegaan aragti shisheeye , mana yaqaanaan beni’aadanimada” ayuu tiri Cabdinuur Wasiirka Warfaafinta Jubbaland.
Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe ayaa ku sugan Magaalada Gaalkacyo isagoo kadib dagaalkii Gaalkacyo u ambabaxay Magaalada Garoowe ee xareunta Maamulka Puntland.